Somaliland: “Reer Sanaagoow, Waxa Jidka Ku Soo Jira Saylici Oo Sharraxan, Ee Idinkay Idin Jirtaa Haddaad Mar Kale Ugu Celinaysaan..” Duur - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Reer Sanaagoow, Waxa Jidka Ku Soo Jira Saylici Oo Sharraxan, Ee...
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Carraale (Duur) oo Wakhtigan ka mid ah Xisbiga Mucaaradka ah ee WADDANI, ayaa Khudbad uu ka jeediyay Munaasibad uu Xisbigaasi Shalay ku qabsaday Magaalada Ceerigaabo eedaymo ugu jeediyay Madaxweyne Ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici oo laftiisu Shalay gaadhay Halkaasi.
Mr. Duur waxa uu sheegay in aanay muuqan in doorashada Wakhtigeeda lagu qabto, laakiin Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland oo sidoo kalena ah Musharraxa Madaxweyne ku-xigeenka ee Xisbiga KULMIYE uu Magaalada Ceerigaabo u tagay Cod uu ka doonayo Shacabka Reer Sanaag, isagoo Dadweynihii dhegaysanayey waydiiyey waxa Saylici uu 7-dii Sannadood ee Xukuumadda KULMIYE Xilka hayso u tagi waayay Ceerigaabo ee Wakhtigan geeyay.
Maxamed Nuur Carraale (Duur) oo ugu horeyn Dadweynaha Reer Sanaag kala hadlaya Diwaangelinta bilaabmaysa Sabtida, ayaa yidhi, “Reer Sanaagoow, Diwaangelinta waxaad ku gashaan Midnimo iyo idinka oo Beel qudha ah idinka oo Cududdiina muujinaya, si aad awooddiina iyo Codkiina ugu aar-goosataan.”
Duur, waxa kale oo uu khudbaddiisa ku weerarray Saylici, “Madaxweynuhu ma Sharraxna, ee waxa Jidka ku soo jira Saylici oo sharraxan, hadda ogaada oo Toddobadaa Sannadood wuu idin iloobay, laakiin wuxuu idin Xasuustay markuu Cod kale u baahday, taana taladeedu idinkay idiin taalla. 7-daa Sannadood halkuu idinkaga maqnaa?. Madaxweyne Axmed ma sharraxna ee Saylici baa sharraxan ee haddaad mar labaad ugu celinaysaan Sanaageey idinka ayay idin jirtaa.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray in aanay muuqan in Doorashada Xilligeeda lagu qabanayo, “Aniga iima muuqato in la qabanayo Doorasho, Waayo? Waxa maqan Awooddii, waxa maqan ku dhicii, waxa maqan Hoggaamintii, Xukuumaddii Xilkaa gudan lahayd ee ku dhici lahayd inay Doorasho qabato iima muuqato.”
Wasiirkii hore ee Arrimaha gudaha Somaliland Mr. Duur, wuxuu Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ku eedeeyay inay Dabada jiideyso in Doorashadu Wakhtigeeda ku dhacdo, isagoo tilmaamay in muranka ka taagan Saami-qaybsiga Kuraasta Baarlamaanku tahay Caqabadda koowaad, “Marka doorashadu dhawaataba waxa la furaa Albaab aan doorashada laga qaban kareynin, imika iyadoo wakhtigii doorashada la joogo ayaa Saami-qaybsi laga hadlayaa. Madaxweyne markaad wax qaybinaysay maxaad Beelaha ugu garsoori wayday?, ma Maanta ayaynu wax qaybinaynaa, waa Wakhtigii Dalka Doorasho la gelinayey. Qaybinta iyo Saluugga Saami-qaybsigu Xukuumadduu ka yimid, oo Madaxweyne waad inoo wada qaadday oo Beelaha Dhexe ayaad Sed-burisay. Saluugga ka jira bariga iyo Galbeedku Qallinkaaguu ka dhashay Madaxweyne.”
Duur, waxa uu sheegay in Rayaale uu wakhtigiisii markii sidan oo kale Saami-qaybsiga la iskugu qabsaday uu Cabashadii Beeshiisa laalay isla-markaana uu kuraastii Beeshiisu xaqa u lahayd ku qanciyey Beelihii kale ee Cabanayey, sidaa si la mid ahna laga rabo Siilaanyo, “Daahir Rayaale, Beeshiisa oo cabanaysa ayuu Cabashoodii tuuray, markaasuu Baarlamaankii (Hore) dareeriyey oo uu yidhi Doorasho hala gelo. Markaa Madaxweyne (Siilaanyo) kii hore miyaad tuureysaa (Xeerka) adigoon ku dambe asteynin, Madaxweyne hala asteeyo wax Ummaddu ku kala baxdo. Waxa la rabaa Madaxweynihii u garsoori lahaa Ummadda ee Madaxweyne u garsoor..”
Maxamed Nuur Carraale